TALATA 26 MAY 2020
LOZAM-PIARAKODIA TENY ANKAZOMANGA : Tovolahy iray maty, efatra hafa naratra mafy
Omaly faha 07 ny volana Aogositra 2019 dia nisehoana trangana lozam-pifamoivoizana tetsy Ankazomanga. Fiara tsy matahodalana iray (4X4 Nissan)nizotra ho any Andraharo niezaka niala bisikileta iray teo anoloany no tavafoaka ny arabe. 8 août 2019
Nandona fiara iray izay nijanona amoron-dalana (peugeot 306) sy mpandeha an-tongotra miisa telo (03) ilay fiara. Ny iray tamin’izy ireo, izay tovolahy 25 taona dia maty tsy tra-drano ary lehilahy lehibe iray 52 taona sy vehivavy iray 20 taona kosa no naratra vokatr’izany.
Naratra ihany ko vokatr’izany ilay mpitondra bisikileta teo anoloana sy mpitondra moto iray izay nanaraka ilay fiara tao aoriana. Efa nentina namonjy toeram-pitsaboana avokoa moa ireo olona naratra vokatr’ity lozam-pifamoivoizana ity ary efa notanana eny amin’ny « Brigade des Accidents de la Circulation » kosa ilay rangahy mpamily ilay fiara tsy mataho-dalana atao famotorana. Tsy mitsahatra manentana ny rehetra izay mpampiasa ny arabe mba ho malina hatrany sy hanaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana moa ny eo anivon’ny Polisim-pirenena.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (128) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (91) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (84) 22 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (74) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (73) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (66) 22 mai 2020